Nasionalista Balkana: Mamerina Indray Ny Tombokavatsa Ho Fanandratana Ireo Politisiana Mitondra · Global Voices teny Malagasy
Nasionalista Balkana: Mamerina Indray Ny Tombokavatsa Ho Fanandratana Ireo Politisiana Mitondra
Voadika ny 15 Novambra 2014 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny русский, čeština , Shqip, Français, Español, English
Dia tsy maintsy halaza be any amin'ny faritra Balkana ato anatin'ny taona vitsivitsy monja ny fametahana tombokavatsa ny sarin'ireo politisiana mpitarika tany aloha ka nahatonga ireny mpitarika ireny ho amin'ny toeran'olona iankohofana.
Ny fomba iray tany aloha fametahana tombokavatsa tao amin'ny fanjakàna Yogoslavy, indrindra fa tany amin'ny 1950 hatramin'ny 1980, dia ny saina sy mari-pamantarana ny Tafi-bahoaka Yogoslavy. Mazàna ireo zazavao izay tsy maintsy manefa raharaha miaramila mandritry ny taona roa no niverina nody niaraka taminà tombokavatsa ho toy ny fahatsiarovana ho an'ireo tany am-ponja. Nisy tamin'ireny ny maripamantarana ny fanjakàna, sarim-pitaovam-piadiana, na sarin'ny endrik'ilay Yogoslavy mpitarika tamin'izany fotoana izany Josip Broz Tito, tena mbola matanjaka tokoa ny fanandratana ny momba azy.
Taorian'ny faharavàn'i Yogoslavia, nanomboka nipoitra taminà tombokavatsa ny sarin'ny sasany tamin'ireo olo-malaza teo amin'ny tantara, indrindra fa eny amin'ny vatan'ireo tovolahy ‘nasionalista’, toy ny sarin'ireo Kroaty fasista mpitarika tamin'ny taonjato faha-20 Ante Pavelić ho an'ireo Kroaty ary an'ilay Serba TChetnik Draža Mihailović ho an'ny Serba. Eny amin'ireo mbola manina ny andro fahiny, misy teknika vaovao amin'ny fampiasàna loko nanomboka nampiasaina ho an'ireo tombokavatsan'i Tito amin'ny endriny vaovao,.
Tombokavatsan'i Tito (ny endriny taloha sy ankehitriny), Pavelić, sy Mihajlović.
Tamin'ny 2009, ny gazety Kroaty mpiseho isan'andro, Slobodna Dalmacija, nitatitra fa lehilahy iray avy any Banja Luka no nanao tombokavatsa ny sarin'ilay Bosniaka-Serbiana politisiana amin'izao andro izao Milorad Dodik. Taorian'izay, toa lasa niha-natanjaka be ity tranga fametahana tombokavatsan'ny endrik'ireo mpitarika ankehitriny ao Balkana ity.
Ny endrik'i Dodik, Bosniaka-Serba mpanao politika, amin'ny endriny tombokavatsa sy saripika natao lasitra.
Efa teo amin'ity toerana ity hatramin'ny 2006 i Nikola Gruevski, Praiminisitra Makedoniana amin'izao fotoana avy amin'ny elatra havanana. Nandritry ny taona maro, naneho ny firaiketam-pony amin'ny VMRO-DPMNE izay antoko eo amin'ny fitondràna ny sasany amin'ireo Makedoniana mpampiasa aterineto, tamin'ny fandefasana saripikan'ny tombokavatsan'i Gruevski nataon'izy ireo. Lehilahy iray no nanao tombokavatsa ny anarana sy fanampin'anaran'ny Praiminisitra, narahan'ny tarehin-tsoratra VMRO sy tànam-bokovoko irays. Iray hafa no nanao tombokavatsa ny endrik’ Gruevski miaraka amin'ny teny mivaky hoe : “Tsy mivadika mandra-maty”.
Tombokavatsa maneho firaiketam-po amin'i Nikola Grevski Praiminisitra Makedoniana.
Ny ohatra faran'izay akaiky indrindra amin'ity fisehoan-javatra ity no niafara teny amin'ny pejy voalohan'ilay gazety Makedoniana Vest [mk]. Lehilahy iray avy any Shtip nanao tombokavatsa ny endriky ny rahalahin'ny Praiminisitra no sady lehiben'ny Sampam-pitsikilovana, Sasho Mijalkov, sy ny zanany lahy. Nilaza ilay lehilahy tompon'ny tombokavatsa fa fankasitrahany noho ny fanampiana azy teo amin'ny fiainany nataon'ilay manampahefana matanjaka sy manankarena ao amin'ny VMRO-DPMNE izany.
Pejy voalohan'ny Vest, gazety Makedoniana, mpiseho isanandro tamin'ny 7 Aogositra 2014, miaraka amin'ny sarin'ilay lehilahy misy ny tombokavatsan'i Mijalkov.
Tsy afaka tamin'ny fampihomehezan'ireo mpanao hatsikana tany amin'ny firenena Balkana maro ity fisehoan-javatra ity Ilay tranonkala Kroaty mpanàla azy “News Bar” dia namoaka tantara foronina iray mikasika an'i Tomislav Karamarko, politisiana avy amin'ny elatra havanana, izay ao anatin'ilay tantara, mangataka aminà mpiangaly tombokavatsa mba hametaka eo amin'ny tratrany ny “sarin'izay Kroaty lehilahim-panjakana goavana indrindra tamin'ny taonjato faha-20″. Raha tokony ho ny lehiben'ny antoko nisy azy sy ny an'i Franjo Tuđman, mpitarika ny Kroaty no nandrasana, ny tombokavatsan'i Josip Broz no azony tamin'ilay mpametaka tombokavatsa.
Fokus koa, gazetiboky Makedoniana tsy miankina, dia nandefa tantara iray mahatsikaiky, manesoeso fironana roa : ny tombokavatsa sy ny fanendrena mahazendana an'ireo minisitra tanora ho ao anaty governemanta nefa zara raha manana traikefa sy fahaiza-manao ahafantarana azy ireny.
Taorian'ny nanaovan'ireo mpankafy fatratra ny VMRO-DPMNE tombokavatsa ny sarin'i Gruevski sy Sasho Mijalkov teny amin'ny sandriny, nanapa-kevitra ny antoko eo amin'ny fitondràna ny hamaly ny hetahetan'ireo andian-taranaka tanora ireo handravaka ny sandriny amin'ny sarin'ny sasany amin'ireo mpiasam-bahoaka.
Vokatr'izany, ho azon'ny ankizy atao ny manana safidy midadasika kokoa azo alahatra amin-dry Bob l'Eponge, Dora l'exploratrice, Diego, sy Tom & Jerry. Misy amidy koa ny andianà chewing-gums ahitàna ny sarin’ i [Dime Spasov] aminà tombokavatsa tsy maharitra .
Andro vitsivitsy taty aoriana dia efa afaka ilay tombokavatra na azo esorina amin'ny savony Bekutan [savonin-jazakely malaza vita ao an-toerana ihany].